Crypto ဈေးတို့ ထိုးကျသော်လည်း ( Henry Aung ) - Neoxian City
Crypto ဈေးတို့ ထိုးကျသော်လည်း ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တို့၏ ဆရာကြီး Hive ကတော့ ခန့်မှန်းထားသလို ပြား ၅၀ သို့ တာစူနေပြီး ဖြစ်ပါသည်။ Hive မှ မဟုတ်ပါ အခြားသော Cryptocurrency များလည်း အနီရောင်သန်းကာ မျဉ်းကြောင်း ဇောက်ထိုး ဆင်းနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
BTC အတက်ဈေးတွင် ပိုက်ဘော မိနေကြသူများကတော့ မည်သို့ ရှိမည်မသိ။ ယခုလောက်ဆိုလျင် အတော်လေး မျက်ခုံးလှုပ်နေကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ Cryptocurrency ဈေးကွက်သည် ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကဲ့သို့ ပြန်ဖြစ်မည်လား မသိ။ ဈေးကွက် တခုလုံး တနှစ်ပတ်လုံး ရဲရဲ နီနေခဲ့သည့်ကာလ။Cryptocurrency Project အတော်များများ နာလန်မထူနိုင် ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါသည်။
ယခုလည်း ဈေးကွက်က ခပ်လှုပ်လှုပ်။ မည်သို့ ဖြစ်လာအုံးမည်မသိ။ ဤကဲ့သို့ ဈေးကွက်ကြာရှည် စွာ ကျဆင်းနေလျင် Cryptocurrency Funding ဖြင့် အစပြုနေကြသော project များအတွက် ပြသနာရှိလာနိုင်ပါသည်။ PSYBER-X / Renarok အစရှိသော Blockchain game များ၏ Software engineer များ Developer များအား လစဉ် Cryptocurrency ဖြင့်သာ လစာပေးနေကြသည် ဖြစ်ရာ ယခုကဲ့သို့ Cryptocurrency ဈေးများကြာရှည်စွာ ကျဆင်းလာလျင် ဆက်လက် တောင့်ခံနိုင်ရန် အလွန်ပင်ခက်လှပါသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ကာလတွင် Steem ဈေးများ ထိုးကျသွားရာမှ တနှစ်ပတ်လုံး ဈေးပြန်မတက်လာသော အခါ Steemit အနေဖြင့် သူ၏ အလုပ်သမား ၇၀ % အား ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတော့ Steemit လည်း ပြန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။
ထိုယခင်က အခြေအနေအား အနည်းငယ် အကျယ်ချဲ့၍ ရေးပြရလျင် Steemit Inc သည် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်၍ Steemit Blockchain ကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ Steemit blockchain သည် Witness များဖြင့် လည်ပတ်သည် မှန်သော်လည်း Software engineer / marketing manager / Blockchain Designer / အစရှိသော ပညာရှင်များ အတွက် Steemit Inc ကလစာပေးထားရပါသည်။
ထို့အပြင် ရုံးခန်းငှားခြင်းနှင့် ဆာဗာ များအတွက်လည်း လစဉ် ကုန်ကျခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့ Steemit Inc က ထိုကုန်ကျငွေများကာမိစေရန် အတွက် ကုမ္ပဏီပိုင် Steem များအား လစဉ် Steem 80000 - 100000 ခန့် ( အတိအကျ မမှတ်မိတော့ပါ ) အား ဈေးကွက်သို့ ပို့ကာ ချရောင်းရပါသည်။
ဆိုခဲ့သည့် အတိုင်း Steem အနေဖြင့် ၈ လခန့် ဆက်တိုက် ဈေးကျနေရာမှ ကုမ္ပဏီ ၏ အသုံးစရိတ်များ ကာမိစေရန် Steem များအား ပို၍ ဈေးကွက်သို့ ပို့ဆောင်ရပါတော့သည်။ ဤတွင် Steem သည် ဈေးကွက်တွင် ဝယ်လိုအား မရှိတော့ပဲ အကျဈေးဖြင့်သာ ချရောင်းနေရသောကြောင့် Steemit Inc ကိုယ်တိုင်က မိမိတို့ Steem အား လစဉ်လတိုင်း ဈေးထိုးချနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။
နောက်ဆုံး Steemit အနေဖြင့် လုံးဝနလန် မထူနိုင် ဖြစ်ကာ လုပ်သား ၇၀ % အား အလုပ်ထုပ်ပြစ်ရသည့် အခြေအနေ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရသလို ဈေးကွက် အတွင်း၌လည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ အား လုံးဝ မဆွဲဆောင် နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
Steemit အား လူအများ စွန့်ခွာ သွားရခြင်း မှာ သူ၏ အဓိက Product ( သူကတိပေးထာသော Product ) SMT ( smart media token ) အား မဖေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ တွင် Steemit က သူ၏ SMT အားချပြနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အလွန် နောက်ကျသွားပြီ ဖြစ်ခဲ့ရကာ မည်သူမျှ စိတ်မဝင်စားတော့ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ Steemit ကုမ္ပဏီအား Tron ပိုင်ရှင် ဂျပ်စတင်းထံသို့ USD $ ၂ သန်း ကျော်ဖြင့် ချရောင်းလိုက်ရပါတော့သည်။
ထို့နောက်တော့ ပိုင်ရှင် အသစ်ဖြစ်သော ဂျပ်စတင်း နှင့် Hive witness များ ပြသနာ တက်ကြရာမှ Hive Blockchain အသစ် ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ Steemit Inc ပြိုကွဲသွားရခြင်း ၏ အကြောင်းအရင်းမှာ Project အား Cryptocurrency ဝင်ငွေ ပေါ်တွင် မှီခိုထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေသော Hive Blockchain အားကြည့်လျင် တခုကောင်းသည်မှာ Steemit ကဲ့သို့ လစဉ် လစဉ် ဈေးကွက်ထိုးချမည့်သူမရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ Cryptocurrency ဈေးအကျ ကာလကြာရှည်လျင်တောင် Hive အနေဖြင့် ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက် စရာ မရှိဟု ထင်ပါသည်။
လက်ရှိ Hive Platform ပေါ်တွင် အဓိကကျသော Project များမှာ Delegated HP များ ဖြင့် လည်ပတ်နေကြသည်ဖြစ်ရာ ဈေးကွက် အတွင်းသို့ Hive များ ဒလဟော ကျဆင်းလာစရာ အကြောင်း မမြင်မိသေးပါ။ Cryptocurrency ဈေးကွက်သည် ငွေကြေး ကစားရာ နေရာ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ကာလ Cryptocurrency ဈေးအကျတွင် Cryptocurrency ဈေးကွက်အတွက်မှ ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၅၀ ကျော်မျှ ထုတ်ယူသွားခဲ့ကြပါသည်။ ယခု တဖန် ဤ ၂၀၂၂ ဈေးအကျတွင်တော့ တလမပြည့်သေးသော အချိန်တွင် Cryptocurrency ဈေးကွက် အတွင်းမှ ဒေါ်လာ ၁.၃ ထရီလီယံ ကျော် ပျောက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
တစုံတယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့ အစည်း တခုခုကတော့ ပိုက်ဆံထုပ် ပိုက်နေပြီ ဖြစ်သလို ပိုက်ဘောမိနေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကလည်း မိမိတို့ အဆုံးခံနိုင်သော ပမာဏထက် မကျော်လွန်စေရန် အရှုံးနှင့် ထုတ်ရောင်းကြပါလိမ့်မည်။ cryptocurrency ဈေးကွက်သည် ရှင်သန်နေပါသည်။ ဈေးကျသွားမည် ထို့နောက် တဖန် ပြန်တက်လာမည်။ ငွေကြေးရင်းနိုင်သူတို့ ကစားကြရာနေရာ ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့ Hive တွင်ရှိနေသူများ အဖို့တော့ Hive ပြား ၅၀ တွင်လည်း ငါးကြင်းဆီဖြင့် ငါးကြင်းကြော်သလို Hive 5$ တွင်လည်း ငါးကြင်းဆီဖြင့် ငါးကြင်းကြော်နေအုံးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ နည်းနည်း ကြော်နိုင်သည်နှင့် များများ ကြော်နိုင်သည်သာ ကွာပါလိမ့်မည်။
10/05/2022 - Tuesday - 18;03 Pm
hive-122133 myanmar cryptocurrency sharing leo archon neoxian proofofbrain creativecoin hivelist
ပြား ၅၀ လည်း ခံသာပါသေးတယ်။
ခုတော့ ငွေလိုနေလည်း မရောင်းရက်တဲ့ ဈေးလေး။
ကျပြီး ပြန်တက်တော့ power ပိုစုမိတာပေါ့။
ဟုတ်ပါ့။ ငွေဖေါ်ချင်ရင်တောင် မရောင်းရက်တဲ့ ဈေး...!PIZZA
@kachinhenry(5/15) tipped @tin.aung.soe (x1)
kachinhenry tipped callmemaungthan (x1)
ဖတ်ပြီး နားမလည်မိတာ တစ်ခုက စျေးကျတဲ့အချိန် Cryptocurrency စျေးကွက်ကနေ ဒေါ်လာတွေ ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလည်းဗျာ။ Coin တစ်ခုခုကို ၀ယ်ဥ ထားပြီး ပြန်ရောင်းခဲ့တာလား။ အဲဒီငွေကြေးပမာဏက လည်ပတ်နေတဲ့ ပမာဏထဲကထွက်သွားပြီး Coin / Token ရဲ့ လည်ပတ်မှု ပမာဏကို လျော့ကျစေခဲ့တာမျိုးလား။ တကယ်မသိနားမလည်လို့ မေးကြည့်တာပါအကို
အခုလက်ရှိ Cryptocurrency အားလုံးနီးပါး BTC နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဝယ်ရောင်းနေကြတာ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါး ရေးပေးပါ့မယ်။ !PIZZA
Hey @kachinhenry, here isalittle bit of BEER from @hive.phyowinkoko for you. Enjoy it!
အစ်ကို ဒီစာရေးတော့ စိတ်ထဲ အားဖြစ်စေပါတယ်...စျေးကျတယ်ဆိုတာ ကောင်းဖို့ ဖြစ်လာတဲ့သဘော......!PIZZA
ဈေးကျမယ်... ပြီးရင် ပြန်တက်မယ်...!PIZZA
ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်း ကြော်ပြီး ဘီဘီနဲ့ မြည်းမယ်
လုပ်ပလိုက်... ငါးကြင်းကြော်နဲ့ ဘီယာ နဲ့... လိုက်ဖက်တယ်။😃 !PIZZA
အင်း ကိုယ်တေကိုယ်တွေ ရေရောင်းမယ် စိတ်ကူး
ရှိသေရှိသေး စေဈေးက ကျသပ။
ဦးထွေး စိတ်ကူးလိုက်လို့နဲ့ တူပါရဲ့.... မရောင်းတော့ဘူးလို့ ထပ်ပြောလိုက်...😃!PIZZA
အေအေးဗျာ မရောင်းတေမရောင်းတော့ဘူးကွ ဟေဟေ့ မရေမရောင်းတေမရေမရောင်းတော့ဗျို့။
Cryptocurrency ကလည်း မှန်းရခက်ပါလားနော်။
အဲ့တာကြောင့် လူတိုင်းလိုက်မလုပ်နိုင်တာပါမယ် 😅။
သူတို့ကို ဘယ်လို အားပေးရပါ့မလဲ။
သူပြန်တက်လာမှာပဲ ​စောင့်​နေရုံပ ကိုဟင်😊!LOLZ